Gmail wuxuu isku xiraa Audio-Video-chat - Geofumadas
Gmail wuxuu isku xiraa Audio-Video-chat
Nofeembar, 2008 tabo cusub, Internet iyo Blogs
Google wuxuu rabaa in uu noqdo milkiilaha wax walba, inta udhaxeysa in wax kasto ay rabto in Gmail uu noqdo midka kaliya ee isku dhafan waxqabadka aasaasiga ah ee isgaadhsiinta internetka.
Bilowga wada hadalka, oo inkasta oo si fudud loo fududeynayo ay tahay mid waxtar leh maadaama ay ka dhex shaqeyso isla daaqada Gmail, iyada oo ikhtiyaarka ah in la wada hadlo wadahadalka, samee raadinta kuwan iyo kan ugu fiican, iyada oo aan ku socon wadiiqo gaar ah, waxa Taasi waxay u fiicantahay hagaha laakiin waxay u xun tahay maamulaha wakiilka sababtoo ah suurtagal maaha in la xakameeyo kanaalka.
Hada waxaa lagu daray isku-dhafka muuqaalka-video-chat, taas oo la mid ah tan la sheekaysiga horey u jiray ... Maxaa loola jeedaa in ay noqoto Gmail caansan oo aan ka badbaadin karno nafteena inaan ku xiranno Skype, wargeeysi iyo boosto inkastoo ay u baahan yihiin inay shaqeeyaan si badan Isticmaalayaasha "celceliska" ma jecla gmail.
Waxay sidoo kale ku khasbanaan lahaayeen inay fuliyaan shaqooyinka goobidda iyo soo dejinta ee shabakadaha bulshada.
Si loo hirgeliyo waxaa lagaa rabaa inaad doorato ikhtiyaarka "Video Chat" ee tabaha sare, soo qaado rakibaha, ha u ordo oo dabadeed dib u gali browser.
Si aad u isticmaasho, waxaa lagu sameeyaa ikhtiyaarada xiriirka, labada sheeko ayaa ah tabaha fiidiyowga iyo in ka badan, halkaas waxaad ku martiqaadi kartaa dadka kale inay sheekeystaan. Haddii aan laheyn webcam, waxaa suurtogal ah in lagu sheekeysto fiidiyoow hal kaliya ama kaliya isticmaali kartaa farsamooyinka maqalka. Isticmaalayaasha webcam waxaa lagu arki karaa astaan ​​kale.
Post Previous«Previous Toy to link to AutoCAD oo leh ArcGIS
Post Next Khariidadaha daabacan ee internetka leh Manifold GISNext »